Ezona zityalo zintle zamanzi acocekileyo, zeziphi? | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, Amanzi akwariyam akwariyam, Izityalo ze-Aquarium
Xa une-aquarium, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba zeziphi izityalo oza kuzibeka ngenxa yobuhle bayo kunye nokuba luncedo nokusebenza kwazo ebomini beentlanzi zakho. Ngamanye amaxesha kukho iintlobo ezininzi zezityalo (zombini ezintsusa kunye nezokuzenzela) kangangokuba kunzima ukukhetha ezifanelekileyo kwi-aquarium yakho.
Apha siza kukufundisa ezinye zezona zityalo zibalaseleyo kuzo zonke iintlobo zasemanzini kwaye ezinye zichaphazela ngakumbi iintlobo ezithile. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngezityalo ze-aquarium?
1 Ezona zityalo zilungileyo ze-aquarium
1.1 Ukuhlonela uPet
2 Iindidi zezityalo ze-aquarium
3 Izityalo zenkqubo yokuhamba ngebhayisikile
4 Izityalo ezifuna ukukhanya okuncinci
5 Izityalo ze-Aquarium ngokwendawo abaya kuba nayo
5.1 Phambili izityalo
5.2 Ukuphakama okuphakathi kwezityalo
6 Izityalo ezichasene ne-algae kunye ne-aquarium enecichlids
7 Ubushushu bamanzi obandayo
7.1 Izityalo Upholstery
7.2 Izityalo ngaphandle kwe-substrate
7.3 Izityalo ezendeleyo
7.4 Izityalo ezibomvu
7.5 Kulula ukukhathalela
7.6 Izityalo ezenza ioksijini
8 Olunye Uqwalaselo lweZityalo ze-Aquarium
9 Lufuna luphi ukhathalelo lwezityalo ze-aquarium?
10 Kutheni kulungile ukubeka izityalo kwi-aquarium?
Ezona zityalo zilungileyo ze-aquarium
Xa siqala ngomhombiso we-aquarium yethu, kuhlala kusiza engqondweni ukuphinda wenze itanki yeentlanzi kufutshane kangangoko kunokwenzeka kwindalo apho kuhlala khona iintlanzi. Ukuze wenze oku, kufuneka ube elungileyo Izityalo ze-aquarium. Kukho izityalo zeplastiki ze-aquarium kunye nezendalo. Ukuba uza kuba nezityalo zokwenyani, kufuneka uyazi inkathalo yazo kunye nokuba loluphi uhlobo lweentlanzi oza kuba nazo ukuze zikwazi ukuvumelana kwindalo enye.
Kweli nqaku siza kuthetha nawe ngezona zityalo zintle ze-aquarium kwaye siza kukunika ezinye iindlela ukuze ukwazi ukuthenga eyona ikufaneleyo.
Utyalo lwezilwanyana ...
Ukuhonjiswa kweDIGIFLEX ...
2pcs Izityalo ezingezizo ...
Iziphumo ze-Uniclife Glossy ...
Emva koko siza kukubonisa ezinye zeemodeli ezifunwayo kwaye yeyiphi enye into enokuhlengahlengiswa kuninzi lweentlobo ze-aquarium ezisetyenziswa ngabantu.
Siqala ngezityalo zeplastiki zeklasikhi. Le modeli iza neseti yezityalo ye-aquarium eya kulungela i-aquarium enobukhulu obungama-5-15. Zinomdla kwaye zinemibala ngombala ukuze ukongeze ubomi etankini. Zama ukulinganisa ukuba zeziphi izityalo eziyinyani ukuze imeko yentlanzi isondele kwindalo yayo njengoko inokwenzeka.
Le modeli ibandakanya umhombiso we-aquarium kunye neziqwenga ezisibhozo zeeplastiki eziluhlaza ze-aquarium. Izityalo ziza ngobukhulu obahlukeneyo ukusuka kwi-5 ukuya kwi-18 cm. Le nto ayinetyhefu kwaphela, ke ukuba intlanzi ithe yayiluma ngengozi, akukho nto inokwenzeka. Iqukethe iplastiki, i-resin kunye nesiseko seceramic. Ilungele zombini ii-aquariums zamanzi amatsha netyuwa kuba ingachaphazeleka yi-pH yetanki.
Zonke izityalo ziza kunye neenyawo ezincinane apho ziza kubeka khona ukuze zingadada kwi-aquarium. Umhlobiso uyinyani kwaye unokubonelela ngeentlanzi ngendawo yokuhlala encinci. Ungathenga le modeli ngokunqakraza apha.
Izityalo zeJDYW 52cm ...
Le yenye yemodeli enezinto ezomeleleyo nezingenabungozi kwintlanzi. Sisityalo seplastiki esisiseko saso sakhiwe ngeceramic kwaye asinalo ivumba elibi. Ayonakalisi iintlanzi okanye imeko-bume yasemanzini. Ayizukurusa okanye ibole. Sisityalo esinokwenyani kwaye sixelisa kakuhle ukuhamba kwezityalo xa zisemanzini.
Inobude obulungileyo kwi-aquarium enesiseko esiqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo lwesityalo kwaye ivumela iintlanzi ukuba zibenendawo yokudlala nokuzimela. Ngenxa ye-morphology yayo, kulula kakhulu ukuyicoca xa imdaka. Kufuneka nje uzifake emanzini ashushu ukuze ususe nayiphi na inkunkuma abanokuba nayo. Kukubukhulu obungama-52 cm kwaye inobunzima obumalunga ne-270 yeegram. Iplastiki yenzelwe ukuba isityalo sihlale sizinzile apho usibeka khona. Ungathenga esi sityalo ngokunqakraza apha.
Amanzi acocekileyo ezityalo zamanzi ...
Esi sesinye sezityalo ezigqibeleleyo zokubeka emazantsi e-aquariums. Yinto encedayo ukuqamba ubume bangemvelaphi. Inemibala eluhlaza eluhlaza. Yenziwe ngeplastiki kwaye inayo Ubukhulu be-20x8x16cm kunye nobunzima be-200 gr. Ingasetyenziselwa amanzi amatsha kunye netyuwa kwaye ayinetyhefu. Inokuhlanjwa ngokulula kwaye ingumhombiso ofanelekileyo kwitanki leentlanzi.
Yenzelwe ngesokethi yodongwe eyenza ukuba izinzile. Ihlala ixesha elide kwaye inobuhlobo kwindalo. Ngaba ngemodeli enje ngokunqakraza apha.
Marina Naturals Inkemba ...
Le modeli iyinyani kwaye inokukhanya okuhle kokukhanya. Enye yeemodeli ezintle esinokuzithenga ukuba sifuna ukunika umnqweno wendalo. kwi-aquarium yethu ngaphandle kwesidingo sezityalo zokwenyani. Ithambe ngokuthinta kwaye ikhuselekile ngokupheleleyo kuzo zonke iintlobo ze-aquarium.
Unombala oluhlaza nobomvu kumagqabi. Ingasebenza njengendibaniselwano elungileyo nezinye izityalo ezineminye imibala ebalaseleyo yokuyinika umdlalo wemibala enokudityaniswa nezo zentlanzi. Yibambe ngokuchofoza apha.
Iindidi zezityalo ze-aquarium
Xa sifuna ukufumana izityalo kwi-aquarium yethu sinobunzima phakathi kwamagama amaninzi angaqhelekanga kwaye ngamanye amaxesha, kunzima ukwazi ukuba ingaba isityalo siyakulungela na iintlanzi zethu. Izityalo (ukuba ziyinyani) zikwafuna iimeko ezithile ezinjengamanzi acocekileyo, isibane esithile, ubungakanani obulungileyo be-aquarium, njl.
Enye yeengxaki esizifumanayo xa sikhetha izityalo kwi-aquarium yethu kunyeNdiyazi ukuba phantse bonke beza negama lenzululwazi. Yiyo loo nto kunzima kakhulu ukubaqonda. Nangona kunjalo, ayisiyonto ekufuneka isoyikise, kuba ngokuthe ngcembe siya kubazi kwaye sihlandlo ngasinye siya siqhelana nabo.
Siza kuqala ngokuchaza ezinye iintlobo zezityalo ngokusekwe kubunzima abanabo bokuzigcina kunye nobuhle bazo, emva kwayo yonke eyona nto iphambili kwisityalo se-aquarium.
Izityalo zenkqubo yokuhamba ngebhayisikile
Into yokuqala ekufuneka siyenzile xa siqala i-aquarium yethu entsha kukuseka ikoloni yebhaktiriya eyenza imisebenzi yayo yokucoca. Lo msebenzi usekwe kwi Guqula inkunkuma ibe yimixube engenabungozi kwintlanzi zethu. Le nkqubo yokuhamba ngebhayisikile ithatha malunga nenyanga, ke ngelo xesha asizukukwazi ukwazisa nayiphi na intlanzi kwi-aquarium yethu, kuba amanzi aya kuba yityhefu kubo.
Ngexesha lenkqubo yokuhamba ngebhayisikile, singazisa izityalo ezisinceda ukuba siphucule inkqubo ngokukhawulezisa. Izityalo zisebenzisa i-ammonia, i-nitrites kunye ne-nitrate ezinokuba yityhefu kwintlanzi. Ezona zityalo zifanelekileyo kule nkqubo zezokukhula ngokukhawuleza, ezithi ziphefumle amanzi kwaye zingabasebenzisi abakhulu benitrate. Abadingi kukhathalelwa okukhulu, kulula ukugcina izityalo.
Umzekelo, sifumana iintlobo ezimbini zezityalo ezisebenza kakuhle kwinkqubo yokuhamba ngebhayisikile:
Eyokuqala ngumsila wempungutye (ICeratophyllum demersumSisityalo ekulula ukusikhathalela, ikhula ngokukhawuleza okukhuluIfuna ukukhanya kancinci kwaye igalelo le-CO2 alifuneki.
Okwesibini yi-ambulia (Limnophila sessiliflora): Ifuna ukukhanya kancinci kunangaphambili, kodwa kulula ukuyinyamekela, ikhula ngokukhawuleza kwaye inomdla ngakumbi.
Izityalo ezifuna ukukhanya okuncinci
Ukuba umtsha kwihlabathi le-aquarium, kungcono ukuqala ngokuba nezityalo ezifuna ukukhanya kancinci. Ngokwesiqhelo, ezi zityalo zifuna ukhathalelo oluncinci kunye nolondolozo oluncinci (ukuba sintsha, cinga sele sikhathalele iintlanzi, kunye nokukhathazeka malunga nezityalo) Ezi zityalo zikhula ngokuntywiliselwa emanzini. Oku kuzokondla inkunkuma yentlanzi (ngesiqhelo zii-nitrate), yinxalenye yokutya esikongezayo (phosphates) kwaye akunakufuneka kukhanyiswe ukuze sikhule. Isichumisi esiqhelekileyo siya kubanceda ukuba bakhule bomelele, ekufuneka bongezwe ngamaxesha athile kodwa ngaphandle kolunye uhlobo lolawulo.
Izichumisi ekuya kufuneka sizisebenzise iya kuba zezo zibonelela nge potassium kunye ne-micronutrients, ngedosi kanye okanye kabini ngeveki:
Isichumisi esisisiseko samanzi: isichumisi esilula nesingabizi mali ininzi
Isichumisi seachem seFlorish: esona sichumiso sihambele phambili sivela kuludumo lweSeachem
Phakathi kwezi zityalo ezifuna ukukhanya okuncinci esikufumanayo:
Ifeni yeJava (IMicrosorium PteropusBakho kwiindawo ezininzi zasemanzini ngo ukumelana kwayo kunye nokulula kokugcinwa. Ukukhula okuphakathi kwaye ayifuni igalelo le-CO2.
Anubia barteri: Luhlobo lwee-Anubias ezisetyenziswa kakhulu. Ayifuni nkathalo kwaye amagqabi ayo makhulu kwaye ajikelezwe.
IHygrophila Polysperma: Isityalo esichasayo, sinamagqabi amancinci kunye nesiqu esinokukhula sibe mde kakhulu. Ngokukhanya okuhle, amagqabi aphezulu ajika abe bomvu ngombala. Isebenza njengophawu lokusilela kwe potassium.
IVallisneria americana gigantea: Tyala ngamagqabi amile okweribhoni, lomdiliya unamagqabi amakhulu. Isasazeka ngokulula kwi-substrate ngokususa ii-stolons ezintsha, zilungile ekudaleni amakhethini emazantsi e-aquarium.
Izityalo ze-Aquarium ngokwendawo abaya kuba nayo
Ekuqaleni, ukuba sibatsha kweli lizwe le-aquariums, nasiphi na isityalo sanele kuthi, kwaye ngokubona iintlanzi zethu ezisempilweni sonwabile. Nangona kunjalo, okukhona singena kwihlabathi leelwandle, zikhona iintlobo zezityalo esifuna ukuzibeka. Ukuze singazibeki izityalo ngaphandle kwazo naziphi na iintlobo okanye izinto eziphambili ngokubaluleka, siza kwenza uluhlu lwezityalo kuxhomekeke kubungakanani kunye nendawo abakuyo ngaphakathi kwi-aquarium ukuze babe ngokugqibeleleyo.
Icandelo elingaphambili le-aquarium kufuneka libe lelona linomtsalane, kuba lelona liya kuboniswa kakhulu eluntwini okanye lelona libonakalayo. Ke, Izityalo esizikhethayo ngaphambili kufuneka zibukise ngakumbi kwaye siya kuzikhetha ngokweenkcukacha. Zonke ezinye izityalo "ziyabakhusela", ngenxa yoko zithande ukuba yeyona nto iphambili kuyo nayiphi na into esetwa emanzini.
Ezona zityalo zintle kwindawo yangaphambili ye-aquarium yindawo ephantsi ekhula ngokunyuka. Ezi zityalo zinxiba i-substrate ngendlela efanayo ukwenza amadlelo amahle. Ingxaki kukuba, ngokubanzi, ezi zityalo zifunwa ngakumbi. Bafuna ukukhanya ngakumbi, isichumisi esingamaxesha ngamaxesha, sifuna ukongezwa kwe-CO2, njl. Yonke into entle ihlawulwa ngaphezulu. Nangona kukho izityalo zokuphakamisa izinto ezingadingi kukhathalelwa kangako, ke ngekhe senze utyalomali olukhulu.
Apha sishiya ezinye zezona zityalo zisetyenziswayo:
Sagittaria subulata: Esi sityalo asifuni i-CO2 eyongezelelweyo kwaye asifuni kukhanyiswa kakhulu. Sesona sityalo silula sokwenza izinto zokugcina iimpahla. Ifikelela kubude obuphakathi, isasazeka ngokulula kwiitronon.
Glossostigma elatinoides: Esi sityalo sifuna i-CO2 eyongezelelweyo kulondolozo lwaso. Ikwafuna ukukhanya okuphezulu. Banamagqabi ajikeleziweyo kwaye Isetyenziswa ngokubanzi njengendawo yokugcina izinto ngenxa yobuhle bayo kunye nobukhulu bayo obuncinci.
UMarsilea hirsutaKwesi sityalo kucetyiswa ukongeza i-CO2 kunye nokukhanya okuphakathi. Isasazeka kuyo yonke imvelaphi, kubandakanya neendawo ezinokukhanya okungaphantsi. Ikhupha amagqabi ama-2 okanye ama-4 ngokuxhomekeke kubungakanani bokukhanya obufikelela kuwo.
Ukuphakama okuphakathi kwezityalo
Izityalo ezikhula ziye kubude obuphakathi zisetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo. Kwimeko yokungabikho kwezityalo zokuphakamisa, Sinokuzisebenzisa ukwenza iindawo ezinobungozi ngaphandle kokuthintela indawo engasemva ye-aquarium. Zikwasebenza ukubenza batshintshele kwindawo yokugqibela ye-aquarium ukuze utshintsho lungabhengezwa kangako. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezityalo zobude obuphakathi ngokuxhomekeke kwimfuno abanayo.
Sibeka eminye imizekelo:
ISaurogyne RubescensLe ayifuni kukhanya kuninzi, kodwa kuyacetyiswa ukongeza i-CO2. Yi shrubby yokuphakama okuphakathi, ayikhuli ngaphaya kwe-5-6cm.
Echinodorus Vesuvius: Esi sityalo asifuni i-CO2 eyongezelelweyo kwaye sinamagqabi agobileyo kakhulu.
IPogostemon HelferiIsityalo esaziwayo kulwakhiwo lomhlaba lwamanzi ngenxa yendlela emi ngayo, ohluke ngokupheleleyo kwezinye. Ingasetyenziselwa njengesityalo esiphakathi okanye njengendawo yokugcina izinto. Kuyacetyiswa ukongeza i-CO2 kwaye ifuna ukukhanya okuphakathi.
Izityalo ezichasene ne-algae kunye ne-aquarium enecichlids
Kukho izityalo ze-aquarium ezithintela ukubonakala kwe-algae, kuba zikhula ngokukhawuleza kwaye zisebenzisa ii-nitrate kwindalo esingqongileyo, eyonanto ibangela ukukhula kwe-algae. I-foxtail ekhankanywe apha ngasentla isebenza ngokugqibeleleyo njengesityalo esichasene ne-algae, kuba ikhula ngokukhawuleza kwaye itya ii-nitrate ezininzi. Sisityalo ekuya kufuneka sithenwe amaxesha amaninzi ngenxa yokukhula kwaso ngokukhawuleza.
Ngokubhekisele kubantu abathanda ukukhathalela ii-cichlids zaseAfrika, kufuneka bazi ukuba ezi ntlanzi zondla izityalo ze-aquarium. Abanye bathanda ukukrwela i-substrate eyenza ukuba izityalo zikhululeke, okanye ngenxa yokudada kwabo bangonakalisa kwaye bazikhulule.. Ke ngoko, izityalo ezihambelana nolu hlobo lweentlanzi ziyafuneka.
Phakathi kwabo sifumana:
I-Java fern (ekhankanywe apha ngasentla)
Anubia barteri (Kukwakhankanywe ngentla)
Ikrele leAmazon (I-Echinodorus AmazonicusIsityalo saziwa kakuhle kwii-aquariums ngokugcinwa kwaso ngokulula, sinamacala amile okwekrele. Ayifuni i-CO2 yangaphandle, babambelela kakuhle kwi-substrate kwaye abadingi kukhanya kakhulu.
Ubushushu bamanzi obandayo
Xa sithetha ngamanzi abandayo, sithetha njalo Ezo ndawo zasemanzini ezingenayo imbawula. Kolu hlobo lwe-aquarium iintlanzi zihlala zitya imifuno, ke kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba izityalo esinokuzibeka kufuneka zinganyangeki.
Nazi ezinye izityalo ezimelana namanzi abandayo:
UCarolinian Bacopa: Tyala ngesiqu esinamagqabi kwaye siyanyangeka kwaye silungele amanzi abandayo. Ngokukhanya okuhle, amagqabi aphezulu ajika abe orenji. Ayifuni i-CO2 yangaphandle.
IVallisneria americana gigantea
Eleocharis Acicularis: Uhlobo lwengca yokutyala izityalo kunye neemfuno zokukhanya okuphakathi, ubungakanani obuphakathi obuxhasa ubushushu obuphantsi. Abafuni i-CO2 yangaphandle.
Zininzi izityalo ezikhoyo kwii-aquariums. Sijolise kwezona ziqhelekileyo nezisetyenzisiweyo, nangona kunjalo, zikhona kuzo zonke iimilo kunye nemibala. Yintoni egqithisile, Kubalulekile ukufumanisa uhlobo lwesityalo olufunwa ziintlanzi ezithile, kuba kuya kubakho abathile abafuna uhlobo olukhethekileyo lwesityalo ukuze baphile.
Ukugquma izityalo zezo zihamba ngaphambili kwi-aquarium. Ke ngoko, kufuneka zibe zezona zinomtsalane. Ngabo bazakubonwa ngamehlo. Izityalo esizikhethayo neziza kubekwa ngaphambili kufuneka zibe zezona zibalaseleyo. Kuyimfuneko ukuzikhetha ngokweenkcukacha ukuze umhombiso ulungiselelwe.
Eyona ilungileyo yile izityalo zithwele izinto eziphantsi.. Ezi zinokuwugquma ngokulinganayo lo mgca ungaphantsi kwaye zenze amadlelo amahle. Ngokubanzi, ukuba zizityalo zokwenyani, zezona zifunwa kakhulu.
Izityalo ngaphandle kwe-substrate
Xa sithetha ngesityalo esingenayo i-substrate, sibhekisa kwinto yokuba ayifuni nasiphi na isondlo. Banokuphumelela nakweyiphi igrabile yangaphakathi. Zizityalo ezifuna ukutyalwa ukuba azinangcambu kwizinto ezahlukeneyo zokuhombisa. Ngale ndlela, unokuba nezinto ezintle zokuhombisa kunye nezityalo zokwenyani ukuba ufuna ukuba ne-substrate ekufuneka uyigcinile esemgangathweni olungileyo.
Zizo ezo esele zendele zombini emithini nasematyeni. Ezi zizityalo ezinenkqubo elula ngokudibanisa umhombiso wendalo kwi-aquarium yethu. Ngolu hlobo lwezityalo akusayi kufuneka silinde ukukhula kwazo kwaye ziya kuba negalelo elikhulu lokuhombisa.
Umbala obomvu uhlala usiza kwiindawo zethu zasemanzini kuba unika umahluko phakathi kokuluhlaza kwamagqabi. Phakathi kwezityalo ezibomvu ze-aquarium ezibaluleke kakhulu zezi zilandelayo:
Echinodorus uMtyholi oBomvu
UCryptocoryne Albida Brown
I-Echinodorus iDayimani ebomvu
ILudwigia iphendula iRubin
I-Echinodorus Hadi Pearl ebomvu
I-Echinodorus Fancy Twist
I-Echinodorus Red Chameleon
Abantu abaninzi bafuna izityalo ekulula ukuzikhathalela xa bezisa izityalo zokwenyani kwi-aquarium yabo. Nalu uluhlu lwezona zilula ukuzinyamekela:
Izityalo ezenza ioksijini
Zizo ezo zibonelela ngeoksijini eyongezelelweyo emanzini. I-Aeration ibalulekile ekulondolozeni impilo entle yentlanzi. Nazi ezinye zezona zityalo zilungileyo zeoksijini:
Olunye Uqwalaselo lweZityalo ze-Aquarium
Xa sine-aquarium ekhayaUkongeza ekunyamekeleni izinto ezinje ngeqondo lobushushu, i-pH, iasidi, phakathi kwabanye, kubalulekile ukuba sinikele ingqalelo kwizityalo esinazo kwi-aquarium yethu. Ezi zityalo kufuneka zihlale zikwimeko entle, ukunqanda naziphi na iingxaki zempilo kwizilwanyana zethu, okanye ukwanda kwebhaktiriya okanye ifungi.
Kubaluleke kakhulu ukuba izityalo esinazo kwi-aquarium yethu Zigcinwa ziphila kwaye zikwimeko efanelekileyo ukuze iintlanzi zizive zikhululekile kwindawo yazo, zinokuzimela kuzo, okanye kutheni kungenjalo, zondle kuzo. Gcina ukhumbula ukuba izityalo ze-aquarium ezityalwe ngaphakathi kwi-aquarium, kufuneka kuqala zihlaziye kwaye zizele bubomi. Kungenxa yesi sizathu ukuba namhlanje sikuzisele iingcebiso ezithile ukuze izityalo zikwazi ukufeza umsebenzi wazo echibini lethu.
Njengomlinganiselo wokuqala, kubalulekile ukuba, ukuze izityalo zikwimeko entle kakhulu, zibe nazo ukukhanya okuhle kunye ne-CO2. Ukuba naziphi na kwezi zinto azonelanga, andikukhuthazi ukuba ufake izichumisi kwizityalo, kuba izinto zinokuqokelelana ngaphezulu, kodwa ungongeza i-potassium encinci ngesixa esincinci.
Kwimeko ye Izityalo ezidadayo zasemanzini, xa amagqabi awo eqala ukubonakala ngaphezulu, kwaye asondele kwilanga, angakuthintela ukukhanya kwezinye izityalo ezingaphakathi kwi-aquarium, ke siyacebisa ukuba ungazivumeli zikhule zide kakhulu nakwezincinci abo banokonwabela imitha yelanga.
Ngendlela efanayo, ndincoma ukusebenzisa uhlobo lwegrabile olinganisa phakathi kweemilimitha ezi-3 ukuya kwezi-5 ukusukela leyo icolekileyo kwaye incinci inokuthi iminyanise iingcambu zesityalo, zibangele ukuba zibole zife. Ngokufanayo, nangona i-pH yamanzi angathathi hlangothi ibonakalisiwe, khumbula ukuba izityalo zikhetha leyo ine asidi encinci.
Lufuna luphi ukhathalelo lwezityalo ze-aquarium?
Izityalo ze-Aquarium zifuna ukhathalelo oluphambili ukuze zihlale zisempilweni. Ezinye iimfuno kufuneka kuhlangatyezwane nazo. Siza kuhlalutya nganye nganye:
eLuziUbungakanani bokukhanya okungena kwi-aquarium yinto ebalulekileyo. Kufuneka ibe kukukhanya okusemgangathweni kunye nobungakanani obaneleyo. Izityalo ezidadayo zifuna ukukhanya kancinci kuba zisondele kumphezulu womhlaba. Zonke ezinye izityalo ziya kufuna ukukhanya kancinci. Kule nto, inokuba kukukhanya kwendalo kunye nokufakelwa.
CO2: Kuyanceda ukuyifaka kwi-aquarium, hayi kuphela kuba sisondlo esibalulekileyo kwizityalo ukuze ifotosinthesize, kodwa ikwanceda ukuthoba i-pH yamanzi. Oku kuyimfuneko ukuvelisa iimeko ezilungileyo zezityalo zethu. Ukongeza, iyasinceda ukunciphisa ukwanda kwe-algae engafunekiyo.
Izichumisi: Ukuba sinokukhanya okwaneleyo kunye ne-CO2 kufuneka songeze uhlobo oluthile lwesichumiso ukuze izityalo zibe nezakhamzimba eziyimfuneko. Kufuneka uzithambise kancinci ukuze zingagqithi kwizakhamzimba kwaye zisetyenziswa lulwelwe.
Isiseko: i-substrate ayimfuneko ngokungqongqo zizityalo. Ngapha koko, kukho izityalo ezingadingi mkhuba. Nangona kunjalo, lo mgca ungafumaneka ngokulula nakweyiphi na ivenkile yezilwanyana zasekhaya kwaye isityalo siya kubulela kuwe ukuba nje sifuna njalo.
Kutheni kulungile ukubeka izityalo kwi-aquarium?
Ukubeka izityalo kwi-aquarium yethu kunokuba ngumbono olungileyo ngezizathu ezininzi. Logama zizizityalo zokwenyani, sinokuzuza kuwo onke amanqaku azisa kwitanki lethu leentlanzi. Masibone izizathu zokuba kulungile ukubeka izityalo kwi-aquarium:
Ziyakwazi ukuzisebenzisa izondlo ezinetyhefu kwitanki lethu leentlanzi kwaye inceda impilo yentlanzi kunye nayo yonke indalo.
Banikezela ngeoksijini emanzini iyanceda ukuphefumla kakuhle iintlanzi.
Banikela ngenxalenye yokuba iintlanzi zidlale kwaye kwangaxeshanye zisebenze njengendawo yokufihla kuninzi lwabo.
Kwindalo, iintlanzi zisebenzisa izityalo ukubeka amaqanda. Ke ngoko, kwi-aquarium baya kuzisebenzisa ezi zityalo njengendawo yokubalekela abantwana babo.
Xa kusenziwa ifotosinthesizing, ukunceda ukulawula ukwanda kwe-algae.
Isinceda ukuba siphucule ubuhle be-aquarium.
Sinokudala iindawo ezintle zomhlaba.
Njengoko ubona, izityalo ze-aquarium lukhetho olufanelekileyo lokuhombisa kunye nokuphucula umgangatho wetanki lethu leentlanzi. Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso kunye nale ngcaciso unokufunda ngakumbi malunga nezityalo ze-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Izityalo ze-Aquarium
Iposti elungileyo kakhulu, indincedile ukucacisa ukungathandabuzeki, ngaphandle kokuba namava kwi-aquariums, uhlala ufunda into entsha, ukubingelela
UAdriana Sanabria sitsho
Imibuliso, enkosi ngolwazi, ndifuna ukwazi ukuba zeziphi izityalo.
Phendula u-Adriana Sanabria
UJuan Perez Perez sitsho
Ndinomdla wokwazi ukuba ndizifumana phi izityalo kwi-aquarium yam.
Phendula kuJuan Perez Perez